Hihamafy ny fanenjehana ataon’ny polisy: 1 411 ireo olona tratra tsy nanao arovava, nandritra ny tapa-bolana | NewsMada
Niakatra indray ny tahan’ireo olona mitondra ny tsimokaretina covid-19, ny herinandro lasa teo. Mitohy ny fanasaziana ataon’ny polisy ho an’ireo olona tsy manao arovava. Tao anatin’ny tapa-bolana monja, mahatratra 1 411 ireo olona tratra ka nasaina nanao asa iombonana mitera-bokatsoa ho an’ny besinimaro…
Somary nivahavaha ny fanarahan-dalàna momba ny fisian’ny Covid-19 teo aloha, noho ny fankalazana ny fetin’ny Krismasy sy ny taom-baovao ka antony nampiakatra ny tahan’ireo olona mitondra ny tsimokaretina tato ho ato, indrindra ho an’ny faritra Analamanga. Manoloana izany indrindra, misy hatrany ny hetsika ataon’ny polisy amin’ny fanenjehana ireo olona minia tsy manaraka ny fepetra napetraky ny fanjakana ka ampanaovina asa iombonana mitera-bokatsoa ho an’ny rehetra. Raha ny fanazavan’ny lehiben’ny sampandraharaha misahana ny fampitam-baovao eo anivon’ny polisim-pirenena, ny kaomisera Ranaivoson Alexandre Sylvain, nahatratra 1 411 ireo tratra tsy nanao arovava ka nampanaovina asa iombonana mitera-bokatsoa ho an’ny rehetra. Nambaran’ity manamboninahitra eo anivon’ny polisim-pirenena ity fa nanomboka ny 28 desambra 2020 ny hetsika ka hatramin’ny 3 janoary 2021 teo, nahatratra 540 ireo olona tsy nanao arovava voasazy. Nitohy indray ny 4 janoary 2021 hatramin’ny omaly ka nahatratra 871 ireo voasazy.
Nanentana sy manao fisavana hatrany ny polisy…
Nanamafy hatrany ny kaomisera Ranaivoson Alexandre fa nanao ny fisavana sy ny fanentanana hatrany ny polisy isaky ny boriborintany sy ny poste de police rehetra, saingy tsy izany irery ny asan’ny polisim-pirenena. Ny teo anivon’ny prefet de police koa efa nanamafy fa ho hentitra amin’ny fanenjehana ireo olona tsy manao arovava satria somary nivahavaha izany tamin’ireny fety ireny ka samy nanao izay tiany hatao ny rehetra tsy nanaja ny fepetra napetraky ny fanjakana. Nambaran’ny polisy hatrany fa ho hentitra ny sazy mihatra amin’ireo mpamily taxi-be sy resevera raha misy olona tratra tsy manao arovava ao anaty taxi-be. Toy ny zava-nitranga, omaly, manoloana ny lapan’ny Antenimierandoholona, miisa 40 ireo olona voasazy nanao asa iombonana mitera-bokatsoa ho an’ny rehetra satria tratra tsy nanao arovava tao anaty taxi-be sy teny an-dalana. “Tsy misy sarangan’olona sy sokajin’olona io fa izay tratra dia iharan’ny sazy avokoa”, hoy ny fanazavan’ny polisy. Tsikaritra fa tsy ny aretina loatra no atahoran’ny olona, amin’izao fotoana izao fa ny mpitandro filaminana indray. “Ny aretina no tokony hatahorantsika fa tsy ny polisy na zandary satria metsy tsy ampoizinao fa ianao mivoaka ny trano io mety hitondra aretina any amin’ny vady aman-janakao sy ny manodidina anao”, hoy hatrany ny fanazavana.